Raadi YouTube Videos Great for Kids
> Resource > YouTube > Liiska A ee Videos YouTube iyo kanaalada for Kids
Liiska A ee Videos YouTube iyo kanaalada u Kids
YouTube videos u noqday foomka caan ah oo madadaalo u da 'walba, oo ay ku jiraan caruurta. In this article waxaan idin tusin ugu fiican YouTube videos for kids iyo sidoo kale channels YouTube caruurta, si aad u siin karaan xiiso ay u qalmaan oo ay la socoto qiimaha wanaagsan.
Qeybta 1: Top 10 YouTube videos for kids
Qeybta 2: Top 5 YouTube channel caruurta
Eeg liiska 10ka YouTube videos for kids ka hoos ku qoran. Waxaad daawan kartaa videos ee halkan .
1 Kids Story: ka soo tuuro Fantabulous Cumulo-Nimbuli
Video Tani waa sheeko ku saabsan cute orgi kasta oo yar yar oo la careysan xilli joogto ah da'ayo iyo cimilada oo xun, iyo sida saaxiibada ugu wanaagsanaa oo dhici in ay cilmiga ku Abuuratay mashiin ay u nuugaan daruuro iyo caawisaa isaga uga takhalusi uu dhibaato.
2 Kids Songs, Yellowberry Jam ama Chuck Brown
Tani waa hees qurux badan caruurta ku saabsan maraqa a sixir ka dhigaya xitaa raashinka kharriban oo wax laga yaqyaqsado dhadhan wacan ee caruurta.
3 Dadka runtii sida music caanaha video
Video waxa uu leeyahay music aad captivating gaar ahaan caruurta iyo heesta san yahay ee caruurta ku necebuna caanaha la cabo.
4 Tim iyo arday Space ah
Kanu waa hees runtii cute ee orgi kasta oo yar oo si tahay saameynta ay Superman ee uu ka soo baxa si ay u caawiyaan dadka qaba dhibaatooyinka. Song Kani waa fal yar dhagax weyn oo lagu magacaabo "Tim iyo arday Space ah".
5 Song Elephant - Gurtida Cool for Kids by Eric Herman
Tani video YouTube ayaa song fiican sung by artist music Kid ee Eric Herman. In this song, Eric gabyaa song ah la yaab leh la jeclaysto oo dhan oo ku saabsan maroodi.
6 Cool alifbeetada (ABC) Song ee carruurta | DidiPop
Tani waa hees guulaystay Abaal-marinta ah, taas oo keliya ma aha iyahoo laakiin sidoo kale baro caruurta ku saabsan alifbeetada iyo xoogga sanqadha iyo laxanka ee xiiso leh iyo hab oo xiiso leh.
7 Charlie qaniinay aan farta - mar kale!
Video Kani waxa uu ahaa dareen YouTube ah marka ay ka soo baxday. Waxaa la daawaday in ka badan 67 milyan oo jeer on YouTube laftiisa. Video ku saabsan yahay 2 caruurta, malaha walaalo ah, halkaas oo mid ka mid ah oday saarata farta afka mid yar oo helay qaniino.
8 Shoo Fly goobeed sameeya Johnny Bregar
Tani waa video waa madadaalo u ah qoyska iyo caruurta. Sung by Johnny Bregar iyo qoray Guy Wood, heesta waxay ku salaysan tahay classic "Shoo Fly goobeed".
9 Willy ma dhoolacadeyn doono u Camera ah - Debbie iyo Friends
Video Tani waa hees aad u qurux badan oo ku saabsan Debbie ee Shaam Willy. Willie kaliya ma ilka hore ee camera iyo ka dhigaysa Wajigooda doqon sawirka. Eeg video ah si loo hubiyo dhan booqatay meelaha Willy caan ah iyo sababta uusan ilka kaamirada.
10 5 Best garaacayaa-garaaca Kaftan
Kaftanka garaaca-garaaca mar walba waa loo jecel yahay ka mid ah caruurta. Video Tani waxay muujinaysaa 5 ee ugu fiican garaaca-garaaca kaftanka ah ee carruurta ay xumme tahay.
Ma ahan oo keliya dadka waaweyn laakiin xitaa caruurta ku raaxaystaan ​​daawashada cajaladaha on YouTube. Sidaas, waxaan soo dhigay liiska 5 wanaagsan ee YouTube channel caruurta.
# 1 Yo Gabba Gabba!
Yo Gabba Gabba waa show TV caruurta caan ah gaar ahaan America ah. Iyo videos ayaa waxay samaynayaan dilka ah ee YouTube iyo sidoo. Bandhigga ayaa ah mid ku saabsan 5 alaabta soo noolaaday oo ay saaxiib DJ Lance Rock.
# 2 Sisinta Street
Tani channel YouTube ayaa ururinta humongous of video, in ka badan 1500 oo caruurta si ay ugu raaxaystaan. Clips waa xiiso leh, madadaalo, waxbarasho iyo dhismaha fulinta-function videos Sisinta Street.
# 3 Baby Einstein
Sida magacaba ka soo jeedin, taas channel YouTube diiradda saarayaa xiiso iyo madadaalo siyaabaha ay u baraan iyo caruurta baraan.
# 4 All4tubekids
Channel Tanu waa meesha ugu fiican ee caruurta iyo waalidka inay wada yimaadaan oo ay muujiyaan daqiiqado wanaagsan ee ay funny sida dheel dheel ah, kaftanka, iwm
# 5 Simple Kids farshaxan
Haddii aad rabto in aad carruurtaada u soo bandhigaan fikradaha xeelad iyo hal abuur leh, oo ay bartaan Casharrada farsamada gacanta, "Simple Kids farshaxan" waa in ay ahaataa caga aad final on YouTube.
More Qalabka Reading
Inta badan Aragti YouTube Videos
Goobaha sida YouTube
Download YouTube in qaab kasta oo
Download YouTube Macmiil
Dooro Downloader YouTube ah
MP3 Alternative Gantaal
YouTube taariikhqorihii Mac
YouTube in qaabab kale
YouTube in CD
YouTube in AVI
YouTube in iPadmini